काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमित हुनेको संख्या एक लाख नाघ्यो - नेपालबहस
काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमित हुनेको संख्या एक लाख नाघ्यो
५ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख नाघेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ११०७ जना संक्रमित थपिएसँगै उपत्यकामा मात्रै संक्रमितको संख्या १ लाख ८ सय ७२ पुगेको हो । देशभर यो संक्रमितको संख्या देशभरकै कुल संक्रमितको ४६।४९ प्रतिशत हो ।
उनीहरुमध्ये ४८८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८७ हजार ६९२ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै संक्रमित काठमाडौं जिल्लामा छ । यहाँ हालसम्म ८१ हजार ५८८ जना छन् । उनीहरुमध्ये ७१ हजार ५९१ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने ३१६ जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रिय संक्रमित ९ हजार ६८१ जना छन् ।
यस्तै ललितपुरमा कुल संक्रमितको संख्या ११ हजार ९४८ जना छन् । उनीहरुमध्ये ९ हजार ६३१ संक्रमणमुक्त भएका छन् भने ८९ जनाको मृत्यु भएको छ । २ हजार २२८ संक्रिय संक्रमित छन् ।
नगरप्रमख थापासहित बैतडीका थप १८ जनामा कोरोना पुष्टि ४४ मिनेट पहिले
कोरोनाले खुम्चीएको पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटकको चहलपहल ५८ मिनेट पहिले
बुन्डेसलिगामा बार्यन जित्दा हल्याण्डको डर्टमुण्ड पराजित २५ मिनेट पहिले
पुनःनिर्माणका अनुभव र सिकाइको अभिलेख राख्न वेविनारका सुझाव महत्वपूर्ण ४६ मिनेट पहिले
भ्यालेन्सियाको आत्मघाती गोलले एट्लेटिको विजयी ५४ मिनेट पहिले
वाग्मती सरकार रिक्त कर्मचारी व्यवस्थापनको काम गर्दै ५६ मिनेट पहिले
मुकेश चौरसियाको हत्यामा संलग्न मुख्य आरोपी पक्राउ ६ दिन पहिले
केही स्थानीय तहमा विद्यालय खुले, केहीमा अझै अन्यौल ! ५ दिन पहिले
घाइतेको मृत्यु भएपछि बर्दिवास फेरि आन्दोलित ४ दिन पहिले
कास्की र स्याङ्जाका उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान ६ दिन पहिले
धरानमा कोरोना संक्रमित २ जनाको मृत्यु ६ दिन पहिले
थपिए १४७७ संक्रमित, २७९८ कोरोनामुक्त २ हप्ता पहिले
बागलुङका दुई अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न आदेश ३ हप्ता पहिले
ह्याकरहरु साइबर आक्रमणको तयारीमा ६ महिना पहिले
सुरक्षाकर्मीलाई मास्क २ महिना पहिले
पृथ्वी राजमार्गको पहिरो पन्छाउने काम तीव्र ! ४ महिना पहिले
देशभर पश्चिमी वायुको प्रभावले चिसो १२ महिना पहिले